कसरि पत्ता लाग्यो ब्ल्याक होल? के सूर्य, पृथ्वीलाई पनि निल्न सक्छ? - JagaranPost
Home/थप/प्रविधि/कसरि पत्ता लाग्यो ब्ल्याक होल? के सूर्य, पृथ्वीलाई पनि निल्न सक्छ?
कसरि पत्ता लाग्यो ब्ल्याक होल? के सूर्य, पृथ्वीलाई पनि निल्न सक्छ?
वैज्ञानिकहरुले यसबारे निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छन् ।
के हो टोर्नेडो?
हावा हुरी आउने कुरा पहिला नै थाहा हुन्छ तर मतलब छैन नेपालमा ।
नेपालले स्याटलाइट किनेको हो या बनाएको हो? अम्बरिस पोख्रेलको टिप्पणी